Saturday January 07, 2017 - 10:09:57 in Wararka by Super Admin
Wariye Cabdi Wahaab Bukhaari oo ah wariye katirsan Radio Andalus ayaa booqday Salagle wuxuuna kasoo diyaariyay Barnaamij mug leh oo ku saabsan magaaladan taariikhda dahabiga ah leh.
Wariyaha ayaa ku billaabaya warbixintiisa sidan:- Safar shaqo oo aan ku booqday bilowgii todobaadkan degmada Salagle ee Wilaayada islaamiga jubbooyinka ayaan kusoo arkay magaalo uu ka taliyo maamul islaami ah iyo bulshada u nuglaatay ku dhaqanka shareecada islaamka taasi oo igu dhiiro galisay in aan diyaariyo barnaamijkan si aan bulshada wilaayatka ku dhaqan ula wadaago wixi aan kusoo arkay halkasi.
Inkastoo ay dhacdo cirifka wilaayada jubbooyinka soohdina ay la leedahay wilaayada islaamiga ee Gedo hadana degmadan waxey kulansatay waxyaabo farabadan oo aysan wada kulansan degmooyinka filkeed ah.
Degmada salagle waxaa mara wabiga Jubba waxaana magaalada ku teedsan beero waa weyn oo ay kasoo go’aan dhammaan dalagyada kala duwan waxaana dalagga beeraha Salagle loo iibgeeya magaalooyinka Kismaayo iyo Baardheere.
Waxaa kale oo degmada allaah ku galladaystay nimcooleyda xoolaha sida geela Ariga iyo lo’da waxaana dadka magaaladasi ay wada yihin xoolo dhaqato beeralay waana fadli uu gaar ah oo uu allaah ku maneeystay degmadasi.
Fogaanshiyaha degmada Salagle iyo Magaalooyinka ay Xiriirka laleedahay.
Degmada Salagle waxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya u jirtaa 500 KM halka magaalada kismaayo ee Jubbada Hoose waxay ujirtaa 330KMBu’aale waxay uu jirta 90KM saakoow waxay ujirtaa masaafo dhan 45KM halka magaalada Baardheere ay u jirto 60KM.
Salagle waxaa loogu dhawaaqay magaca degmanimo wax yar ka hor inta aysan burburin xukumadii uu madaxweynaha ka ahaa maxamed Siyaad Barre.
Dadka qaar ayaa qaba in ku dhawaaqistaasi aysan ahayn wax sida uu sii weyn laakin magaaca degmanimo uu si rasmi ah uu dhaqan galiyey maamulka mujaahidiinta oo magaaladasi gacanta ku haya ku dhawaad 10 sanadood.
Marki ugu horeeysay ee aan magaalada galay ayaan isku dayay in aan helo dadka aqoonta u leh magaalada Salagle waxaaana markiba aan helay oday Da’uud idle maxamuud oo soo ahaa mudo 7sano ah gudoomiyaha magaalada kaasi oo ay si iskood ah ay uu doorteen dadka magaalada oo xilligaasi utaag wayay maleeshiyadkii magalaadasi ku sugnaa ka hor inta uusan si laab furan ugu wareejin maamulka magaalada mujaahidiinta oo xilligaasi gacanta kusoo dhigay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada jubbooyinka oo ay ku jirto magaalada xeebta ah ee Kismaayo.
Magaalada Salagle waxay leedahay sedax sifo oo ay kala gooni tahay dhammaan magaalooyinka dalka soomaaliya.
1-Dadka Salagle ku nool waligood isuguma imaan Fadhi kudirir iyo waxaa layiri (Qiila Waqaala), dadka magaalada deggan waxay subax walba u dareeraan tacliim, tacab iyo ganacsi.
2-Taariikhda lama sheegin Qof deggan Magaalada Salagle oo cadawga ugalay lana shaqeeyay shisheeyaha dalka kusoo duulay
3-Dadka ku dhaqan Magaalada Salagle iyo Maamulka Islaamiga ah waligood isma qaban oo wax khilaaf ah kama dhax dhicin.
Halkan ka dhageyso Barnaamijka Booqashada Andalus oo Salgle lagusoo qaatay MP3
FG: Macluumad dheeri ah oo aan qoraalka lagu sheegin ayaa kujira Barnaamijka
Madaxda Sedax Maamul Goboleed oo Nairobi kula Kulmay Diblumaasiyiin Reergalbeed ah.
Dagaal Xooggan Oo Markale ka dhacay Qoryooleey.